Hetsi-Panoherana Faobe Tsy Fahita Firy Tao Pakistan Hanoherana ny Radikalisma · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2014 10:35 GMT
Roa andro taorian'ilay fanafihan'ny Taliban nampihoronkoditra tamin'ny sekoly iray notantanin'ny miaramila tao Peshawar izay nahafatesana mpianatra mihoatra ny 130, dia nisy mpitondra fivavahana nampiteraka adihevitra iray antsoina hoe Abdul Aziz nandà ny hanameloka ilay famonoana faobe, ka niteraka hetsika tsy fahita firy hanoherana ny radikalisma tao amin'ny firenena.
Nilaza ihany koa i Abdul Aziz fa tsy “safidim-pahendrena” ny fampiasan-kery amin'ny Taliban. Aziz no lehiben'ny mpitondra fivavahana ao amin'ny Lal Mosque, iray amin'ny firenena lehibe indrindra ao an-drenivohitra. Malaza amin'ny radikalisma ny moskea sy ny seminera miaraka aminy ary efa nisy famoretana faoben'ny miaramila naharitra folo andro tao tamin'ny 2007, izay niteraka fahafatesan'olona anjatony ka maro amin'ireo ny mpianatry ny seminera radikaly. Ny rahalahin'i Aziz no sefo tamin'izany fotoana izany ary maty nandritra ny bemidina. Niezaka ny handositra ny moskea tamin'ny fanaovana burka i Abdul Aziz, saingy tratra. Navoaka noho ny fandoavana onitra izy roa taona taty aoriana. Ary nanomboka tamin'izany izy no nanokatra indray ny moskea ary lasa lehiben'ny mpitondra fivavahana indray.
Ny takarivan'ny Alakamisy nisy mpikatroky ny fiarahamonim-pirenena maromaro, politisiana sy mpianatra tonga teo amin'ny Lal Masjid nihiaka teny tarigetra hanoherana an'i Abdul Aziz. Nanoratra ny anaran'ireo mpianatra maty tao Peshawar tamin'ny fafana ry zareo ary nanao fiareta-tory narahina fandrehetana labozia.
Hetsika [itakiana ny moskeanao] eo anoloan'ny Lal Masjid ao Islamabad. Sambany nanao dingana hiroso ny Fiarahamonim-Pirenena…
Ny hetsi-panoherna dia nomanin'i Jibran Nasir, mpisolovava sy mpikatroky ny zon'olombelona avy any Karachi. Niteny izy:
Tonga tao Islamabad aho hanatrika lahavolana, saingy nipoaka ny voinan'i Peshawar ary niova ny zava-drehetra. Ny ampitso, namoaka fanambarana tsy levon'ny vavoniko ny mpitondra fivavahan'i LalMasjid ka nanapa-kevitra aho fa tokony hihetsika izahay fa tsy hiverina hody any Karachi. Tianay ny hitakiana ny moskeantsika, ny fiarahamonintsika, ny tanànantsika ary ny firenentsika iray manontolo hiala amin'ny mahery fihetsika. Tsy ho avelantsika intsony na iza na iza mijoro eo amin'ny polipitr ka hitory fankahalana. Tsy hijoro eo akaiky ary hijery ny olona tahaka an'i Abdul Aziz hampiasa ny anaran'ny Mpaminany Masina (fiadanana ho aminy) sy ny fivavahantsika hampiasa herisetra. Miantso ny vahoakan'i Islamabad aho hivoaka ny tranony ary hitaky ny tanànany.
Nameno FIR [Tatitra Voalohany Fampahalalàna ] hitoriana ireo mpandray anjara tamin'ny fihetsiketseha-panoherana ny mpitantana ny Moskea Lal. Nankatò izany ireo polisy nitondra ny fitaovana enti-manohitra ny rotaka tao an-toerana ka nitaky ny mpanao fihetsiketsehana hiparitaka.
Nisioka Faisal Sabzwari avy ao amin'ny MQM:
Jereo… purana, Naya ya gaya #Pakistan? Tatitra Fampahalalàna Voalohany hitoriana ireo Fiarahamonim-Pirenena noho ny fanoherana ireo mpitondra fivavahan'ny Lal Masjid.
Na izany aza dia nanambara i Nasir sy ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena fa hanatontosa fiareta-tory fandrehetana labozia eo anoloan'ny Moskea Lal ry zareo ao anatin'ny herinandro, ary hotanterahina isaky ny talata alina izany avy eo.
Niely nanerana ny firenena vetivety teo ho hetsika lehibe hanoherana ireo mpiaro ny Taliban sy ireo mahery fihetsika na aiza na aiza ireo hetsika nipoaka tampoka tamin'ny Alakamisy. Nisy ireo fihetsiketseha-panoherana taorian'ny vavaka zoma hiampangana ny fanambaran'ny mpitondra fivavahan'ny Moskea Lal, Maulana Abdul Aziz. Nisy ny fanangona-tsonia tao amin'ny Change.org hampandefasana an'i Abdul Aziz any amin'ny fitsarana noho ny famadihana sy ny fampihorohoroana izay nahazo mpanohana mihoatra ny 4000.
Tamin'ny 19 Desambra, nisy FIR (First Information Report = Tatitra Fampahalalàna voalohany] napetraka hitoriana an'i Abdul Aziz tao amin'ny komisariàn'ny polisy ary ity lahatsary Facebook ity no nandrakitraizany fotoana izany.
Rahampitso amin'ny toriteny jummah [zoma] raha tsy manameloka ny fanafihana tao Peshawar ny Imam-nareo dia mijoroa ary anontanio azy. [Takio ny Moskeanareo]
Fandraisana an-tanana mahavelombolo tokoa avy amin'i @MJibranNasir & @marvisirmed – mamaly ireo mpitondra fivavahana mampiely teny fankahalana sy ireo mpikatroka ka [Takio ny Moskeanareo]
taratasy itsarana ireo Mullah raha miaraka amintsika izy ireo na amin'ny Taliban? Raha TSY manameloka ny Talibanisma amin'ny toriteny ry zareo dia andao hihetsika ary [Takio ny Moskeanareo]
Mpanao fihetsiketsehana irao ao amin'ny pejy Facebook #ReclaimYourMosques – We Demand Action on FIR #LalMasjid [Takio ny Moskeanareo – Mila hetsika amin'i LalMasjid izahay] nanoratra izao:
Miorina ny fototra. Eritrereto izao, na ianao hangina ho mpijery fotsiny na ianao miaraka aminay. Raha tsy manaitra anao amin'ny torimasonao ny zaza 141 dia matokia fa mpiaro ara-kevitra tahaka an'i Abdul Azz ianao.
Vahoaka maro dia maro ao amin'ny Klioban-gazety ao Karachi mitaky sy mihiaka mafy [sambory i Abdul Aziz]
Nikatona tanteraka i Hyberabad ho fanoherana an'i Abdul Aziz izay nandrahona an'i Altaf Hussain
Solontenan'ny ISIS ao Pakistan, Namana Akaikin'ny Taliban, Mpisolovavan'ny devoly – Abdul Aziz avy ao amin'ny Lal Mosque [sambory i Abdul Aziz]
Henatry ny firenena i Lal Masjid sy i Burka Maulana. Tokony alefa any amin'ny fitsarana izy roa ireo hamerenana ny fiandrianam-pirenena. [sambory i Abdul Aziz]
Mafy sy mazava izahay [sambory i Abdul Aziz]
Niondrika teo anatrehan'ny fanerena i Maulana Aziz ka niala tsiny tamin'ny Alahady noho ny tsy nanamelohan'ny ny famonoana ankizy. Nisy mpamaky iray namaly ny lahatsoratra tao amin'ny Tribune.com:
Fialan-tsiny kely loatra tara loatra, olona mahamenatra raha tsy maintsy mieritreritra lalina vao manao fialan-tsiny ary izany dia mbola taorian'ny fanerena ihany… Tena olona tsy manana fahamaotonana sy fahaiza-mitondra-tena mihitsy… Misy zaza maro tsy manan-tsiny maty dia mbola mieritreritra momba izany aloha izy. Lehilahy mahamenatra ary mahamenatra ihany koa isika izay mihaino azy, mila mihidy any an-tranomaizina maharitra izy sy ny sakaizany rehetra.
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Qurratulain Zaman (Annie) .